Thwebula Norton Ghost 15 – Vessoft
WindowsUhleloIsipele nokubuyiselaNorton Ghost
Norton Ghost – isofthiwe yakhelwe for data ubuyisele. Ikuvumela ukudala umfanekiso idrayivu kanzima noma izigaba zomuntu ngamunye bese ngcono inqubo alulame uhlelo. Norton Ghost isekela kanzima, CD, DVD ne Blue Ray amadiski, futhi ibuye NAS, FTP noma Jaz abathwali nezinye yokugcina zendawo noma esikude. Isofthiwe kwenza Ifaka kusigcinamlando ukusetshenziswa ukuthi baqhuba isikhathi bese ugcina updates wokugcina.
Ukukwazi ukuqamba disk izithombe
Isipele Local nangaphandle
Usekela ahlukahlukene othwala
Ifaka kusigcinamlando Automatic
Thwebula Norton Ghost
Amazwana ku Norton Ghost
Norton Ghost software ehlobene
I-HWMonitor – ithuluzi lokuqapha isimo sezinto ezahlukahlukene zekhompyutha. Isoftware iyakwazi ukukhombisa inani lamanje, elikhulu kanye nelincane lamandla we-voltage yezakhi zekhompyutha.
I-ImageJ – ithuluzi elinamandla lokuhlaziya nokuningiliziwe kwamafayili wesithombe. Isoftware inesethi enkulu yokuhlunga, ama-plugins, namanye amathuluzi.